स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी नै गायब
अर्जुन अधिकारी काठमाडौं
२०७७ चैत ६ शुक्रबार १९:०४:००
मन्त्रीपरिषदले नयाँ दरबन्दी सृजना गरेपछि मात्रै सचिव नियुक्ती हुने
अर्जुन अधिकारी, काठमाडौं
तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरी र सरकारबीचको विवादले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी गुमेको छ । शुक्रबार स्वास्थ्यसचिव सिफारिस गर्न बसेको सिफारिस समितिले स्वास्थ्यको दरबन्दी नभेटेपछि प्रक्रिया रोकिएको हो । अब मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरेपछि मात्रै सचिव नियुक्ति हुने सिफारिस समितिले जनाएको छ । योसँगै स्वास्थ्यको प्राविधिक सचिव बन्ने बाटो तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
सिफारिस समितिका एक सचिवले भने, ‘स्वास्थ्यमा ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मी छन्, उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक सचिव बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ । तर, सरकारले स्वास्थ्यको दरबन्दी हटाएको पाइयोऽ त्यसैले तत्काल निर्णय गर्न सकिएन । स्वास्थ्यबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको देखियो, तर स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यको दरबन्दी देखिएन,’ ती सचिवले भने ।
‘अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनतर्फको मात्रै सचिवको दरबन्दी छ । नयाँ सचिव बनाउँदा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्रै बनाउन सकिने देखियो,’ लोकसेवा आयोगका एक सदस्यले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेकाले शुक्रबार सचिव सिफारिस गर्न सकिने उनले भने ।
सरकारले तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीको राजीनामा ०७६ पुसमा स्वीकृत गरेसँगै स्वास्थ्यतर्फको सचिव बनाउने कुनै तदारुकता देखाएको थिएन । ‘२८ असोज ०७५ मा डा. पुष्पा चौधरीको सरुवापछि प्रशासन क्षेत्रका सचिवले स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन् । त्यही वेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको स्वास्थ्यको दरबन्दी खारेज गरिएको रहेछ,’ ती सचिवले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
आयोगका सदस्यहरूको समयावधि आगामी १० गतेबाट सकिएकाले स्वास्थ्यसचिव बन्नेबाट सम्भवत: रोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ३९ हजार निजामतीलाई ६९ सचिव हुँदा ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मीका लागि शून्य सचिव छ । देशभर ७५ हजारको संख्यामा सरकारी कर्मचारी छन् । त्यसको आधा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव दामोदर रेग्मीका अनुसार हाल करिब ७५ हजारको संख्यामा निजामती कर्मचारी छन् । यसमा सबै विधा समेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहत मात्रै ३५ हजार पाँच सय ४४ स्वास्थ्य जनशक्ति छन् । बाँकी ३९ हजार चार सय ५६ जना स्वास्थ्यभन्दा बाहेकका विधाका छन् । रेग्मीका अनुसार कुल सचिवको संख्या ७० जना भएकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै सचिव रिक्त छ ।
#स्वास्थ्य मन्त्रालय # प्राविधिक सचिव # दरबन्दी
मनसुनमा आउने स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्न सरकारी तयारी अवस्थामा छ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थप हुने
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दियो बेड खाली भएको सूचना तर, अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामी भुइँमा
जथाभावी आइसोलेसन सेन्टर नखोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे आग्रह (भिडियोसहित)
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो– बहिरंग सेवा स्थगन गर्नू, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई लामो बिदा नदिनू